I-AUDUSD yooVimba-Funda ukuRhweba
Uqikelelo loNyaka lwe-AUDUSD (2022)
I-AUDUSD ye-Forecast yoNyaka - i-AUDUSD ibuyele kwiNgxaki kwiiNqanaba eziPhakamileyo
I-Forecast yonyaka ye-AUDUSD ibona ukupompa kwakhona kwingxabano yamanqanaba aphezulu exabiso. Ibethwe ngokunzulu kwikota yokuqala ka-2020, iDola yase-Australia yathatha ithuba lobhubhani we-COVID-19 ukuze izomeleze ngexabiso ledola yaseMelika. Imakethi, ke ngoko, yahlala inyuka ngokunyuka okuqinileyo kwe-bullish ngexesha lokunyanzeliswa kokuvalwa ukuze izibuyisele kusukuzwano lwamanqanaba aphezulu amaxabiso.
AUDUSD Amanqanaba abalulekileyo
Amanqanaba obonelelo: 0.77230, 0.80380, 0.87410
Amanqanaba eMfuno: 0.61410, 0.66780, 0.70070
I-AUDUSD yeSicwangciso seXesha elide: Bullish
I-AUDUSD yayiyekile ukuhla kwayo ngokusebenzisa inkxaso eqinile kwi-0.70070. Emva koko, abathengi baqala ubunjineli bokuphuma kwinqanaba lentengiso. Ke ngoko, imakethi yangena ekudityanisweni konyaka okususela phakathi ku-2015 ukuya phakathi ku-2017. Imarike yathatha inyathelo elilandelayo ukuya phezulu, kuphela ukujongana nokukhatywa kabini, okwakhokelela ekuweni kwamahhala kwimarike. Ixabiso lehla kumanqanaba amaninzi abalulekileyo de lafumana ikhefu kwi-0.61410.
Eli xesha lingqamene nexesha eliphezulu le-COVID-19, apho iDola yase-Australia yanyusa ixabiso layo. Ukunyuka kwexabiso kume ngokukhawuleza ngaphantsi kwe-0.77230, ehambelana nomhla wonyaka omtsha we-2021. Imarike yayikhuselwe kakuhle kweli nqanaba, elihambelana nomda ophezulu weBollinger Band. Ukulandela oko, ixabiso libuyela kwinqanaba elinamandla lenkxaso ye-0.70070, ukurhweba ngaphantsi kwe-Bollinger Band mid-line.
I-AUDUSD yeSicwangciso seXesha eliPhakathi: Ukutshintsha
I-AUDUSD ibeka umva kwingxabano yezinga eliphezulu lexabiso njengoko iqala enye iseshoni yokudibanisa. Itshathi yeveki ibonisa ukuba imarike idibene kwinqanaba lemfuno kwaye ngoku ixoxisana nomgca ophakathi weBollinger Band kwindlela eya phezulu ukuvavanya inqanaba lokumelana ne-0.77230. I-Stochastic Oscillator ikwabonisa umgca wayo wesignali ubhabhela phezulu uxhasa iinkunzi.
Udibaniso lwangoku lunokuba lunyaka ngokuxhomekeke kwixesha elithatha ukuba iinkunzi zenkomo ziphume kuyo (okanye iibhere zithathe indawo). Uqikelelo lwentengiso kukuba imarike inyukele ekuchaseni okulandelayo kwi-0.80380.
I-AUDUSD idibana nokuBuyisela ukuBuyiselwa kwayo phezulu
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-nge-6 kaJanuwari
I-AUDUSD idibana nokusilela njengoko izama ukubuyisela umhlaba olahlekileyo. Ukusukela ukuhla ukuya kwinqanaba elibalulekileyo le-0.69980, ixabiso liye labuya ngokukhawuleza, lityhala kumanqanaba abalulekileyo ngomzamo omkhulu. Nangona kunjalo, i-AUDUSD ngoku idibana nokuphazamiseka kwi-0.72660 ukuchasana ngamandla aphelile. Ke ngoko, imali yokuhlawula amatyala yehle nangaphaya kwenqanaba elilandelayo elibalulekileyo. Ixabiso lisenalo ithuba ukuba liyabuyela umva emva kwexesha, kungenjalo lingaya emazantsi kwimarike.
Amanqanaba okumelana: 0.73250, 0.72660
Amanqanaba enkxaso: 0.71780, 0.70960
Ukusukela ngasekupheleni konyaka ophelileyo, i-AUDUSD ibisoloko inyusa i-trendline, nangona inamandla ehlayo ethintela ngamaxesha athile, intengiso ihlala inyuka. Nangona kunjalo, ngomhla we-19 kaNovemba, ukunyuka kweemarike kwaphuka, kwaye oku kwakhokelela ekudibeni okukhulu kwexabiso. I-AUDUSD yehla ngaphantsi komgca we-uptrend kwaye yaphula amanqanaba amaninzi abalulekileyo ukufikelela kwinqanaba lenkxaso ye-0.69980. Imakethi yaphinda yaqalisa ukunyuka kwayo ukusuka apho.
Ipateni yesikhandlela samajoni amhlophe-amathathu ke ngoko yaqeshwa ukuqalisa ngokutsha ukunyuka kwemarike. Ixabiso lafika kwi-0.71780 kwaye langena ekuhlanganiseni kunye ne-0.70960 njengenqanaba lenkxaso. Emva koko, ixabiso liphuka phezulu kwaye lidibana nokunye ukuchasana kwi-0.72660. Esinye isigaba esiqalayo saqala, kodwa i-AUDUSD ibuthathaka kweli nqanaba kwaye yehla phantsi. I-RSI (I-Relative Strength Index) ibonisa ukuhla kwamandla emarike njengoko umgca wayo ubuye wehla ngaphantsi kwe-50 uphawu.
I-AUDUSD Ixesha elifutshane iTrendi: Bearish
Ekuhlahleni ngaphantsi kwe-0.72660 inqanaba lokumelana, imarike yehle ngaphantsi kwexesha le-MA le-100 kwitshathi yeeyure ze-4. Ngaphezu koko, isalathisi se-RSI ngexesha elifanayo sisondele kakhulu kwi-oversold bolder. Oku kubonisa indlela ehla ngayo ukunyuka kwexabiso lentengiso, kodwa ikwabonisa ukuba sinokulindela ukunyuka kwakhona kwexabiso. Ukuba oku kuyenzeka, imakethi iya kubuyiselwa kwaye ihlawule nge-0.72660 ukuchasana ukuya kwi-0.73250.
I-AUDUSD Ibuyisela kwakhona kwiNqanaba leNkxaso ye-0.69980
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-nge-30 kaDisemba
I-AUDUSD ibuyisela kwinqanaba elikhulu lenkxaso kwi-0.69980. Ixabiso ngoku libuyiselwa kwii-bearish bouts eziye zagcinwa njengoko imarike yehla kwi-high-level resistance kwi-0.75480. Ukugatywa kwelo nqanaba kuqinisekisa ukuhla kwexabiso le-7.30% kwizinga elibalulekileyo le-0.69980 kwi-3 kaDisemba. Iibhere ngoku ziphelile amandla azo, zinika iinkunzi zeenkomo ngokukhululekileyo ukuphembelela imarike.
I-AUDUSD Amanqanaba amakhulu
Amanqanaba okumelana: 0.72660, 0.73250, 0.75480
Amanqanaba enkxaso: 0.69980, 0.70960, 0.71780
Abathengi beemarike babonwa ukuba bacoce emva kweebhere. Ixabiso lalinyanzeliswa ziinkunzi ukuze zigcine i-uptrend. Iibhere, nangona kunjalo, ziqhubekile nokutyhutyha imakethi ngokuchasene nomgca we-uptrend de ekugqibeleni wophule kwaye wadlula amanqanaba amakhulu. Inqanaba lexabiso le-0.69980, nangona kunjalo, lihlala liqinile ngokwaneleyo ukumisa ukuwa kwexabiso. I-AUDUSD ngoku ibuyisela kweli nqanaba lexabiso.
Intshukumo yemarike iphezulu kancinci kancinci. Oku kungenxa yokuba imikhosi ye-bearish isasebenza kwimarike. Ixabiso lenyuka kuqala ngaphezu kwe-0.70960, apho liqokelele ixesha elifutshane. Emva koko, i-AUDUSD igxotha ukusuka kwelo nqanaba ukuya phezulu kwe-0.71780, apho imarike ngoku iyancipha ngaphambi kokuba iqhube phambili phambili. Umgca omde we-Parabolic SAR (Stop and Reverse) amachaphaza unokubonwa ngaphantsi kwekhandlela lemihla ngemihla ukuze uqinisekise ukuthengiswa kweemarike.
Kwitshathi yeeyure ze-4, ixabiso liyancipha ngaphantsi kwe-0.72660 yezinga lexabiso. I-Parabolic SAR, njengakwitshathi yemihla ngemihla, ibonisa ukuqina kunye namachaphaza angaphantsi kwamakhandlela eeyure ezi-4. I-Oscillator ye-Stochastic isondela kwi-overbought, kodwa kunokubakho i-pullback ukwenzela ukuba ixabiso liphuke ngaphaya kwenqanaba langoku. Abathengi baya kujonga ukwaphula konke ukuchasana ukubuyisela imarike kumgca we-uptrend.
I-AUDUSD ibuyisela ikhosi emva kokubetha iiveki ezimbini eziphakamileyo kwi-0.7186
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-nge-9 kaDisemba
I-AUD / i-USD ibini yaqhubeka iyancipha i-intraday ngokuqhubekayo kwiseshoni yonke, ihla ukuya kwimihla ngemihla ephantsi ngexesha lokuhlalutya malunga nenqanaba le-0.7140-35. Ukufika kwentsha Idola yaseMelika Imfuno yayiyeyona nto ibalulekileyo eyayibeka uxinzelelo kwisibini se-AUDUSD njengoko iimarike zijonge ngaphaya kwamanani angcono aseTshayina okunyuka kwamaxabiso.
Amanqanaba enkxaso: 0.7100, 0.7050, 0.7000
Ngethuba leseshoni, i-AUDUSD yaphuka kwinqanaba elincinci lenkxaso ye-0.7150. Ukuqhekeka kuphawu lokuthengisa, kunye nenjongo ye-0.7100 kwaye mhlawumbi ukuya kuthi ga kwinkxaso eqinile kwi-0.7050 yokuthatha inzuzo yexesha elisondeleyo. Kukho konke okunokwenzeka, izinga lotshintshiselwano lwe-AUDUSD lingaqhubeka nokuwa kwiseshoni yokurhweba elandelayo.
Inqanaba le-0.7050 linokuba yinto ekujoliswe kuyo kwiibhere. Ngelixa ukubuyiswa kwakhona kwinqanaba le-0.7186 kusenzeka, akukho datha yaneleyo yokuqinisekisa ukuguqulwa kwendlela elungileyo ngeli xesha. Oko kukuthi, inokumela nje ukuguqulwa kwendlela yokudityaniswa kwexesha elide. Kwi-plus side, ukubuya kwe-bullish ngaphezu kwe-0.7160 uphawu kuya kubuyisela ukuzithemba komthengi.
Iimpawu zokukhawuleza kwixesha le-4-iyure, ngakolunye uhlangothi, okwangoku zikhomba ukuthengiswa okuqhubekayo kwixesha elisondeleyo. I-RSI ibuyela kwi-midlevel yayo ye-50, ngelixa i-4-iyure ehambayo i-avareji ye-5 kunye ne-13 iyancipha kwaye inyuke ngaphezu kwexabiso ngelixa ihleli kwindawo engafanelekanga.
Nangona kunjalo, ukuba imarike ivala ukuchasana okuncinci kwi-0.7150 kwiiseshini ezilandelayo, inokuthi ikhuphe inzala yokuthenga kwaye iqinisekise ukunyuka okungaphezulu ukuya kwimiqobo ye-0.7200, enokuthi iqalise i-rally entsha. Ukuba kukho ukuphindaphinda okunamandla, izithintelo ze-0.7300, ezichongiweyo njengokumelana, ingaba yinjongo elandelayo.
Iibhere ze-AUDUSD zigcina ukuLawulwa, izinto ezibonakalayo ezibekwe kwi-Sub 0.7300 Level
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Novemba 11
I-AUDUSD currency pair 0.44% ngosuku ukuya kwinyanga enye ephantsi malunga ne-0.7287, phantsi ngosuku lwesithathu ngokulandelelana emva kokukhululwa Imisebenzi yaseOstreliya data ekuqaleni ngoLwesine. Iimpawu zesantya zikhomba ukuwa okungaphezulu, kubeka i-sub 0.7300 kwinqanaba ekugxininiseni kwiiseshoni ezizayo.
Amanqanaba okumelana: 0.7555, 0.7450, 0.7350
Ekuqaleni kweseshoni yaseMelika, i-AUDUSD yaphuka kwinqanaba elincinci lenkxaso ye-0.7300. Ukuqhekeka kuphawu lokuthengisa, kunye nenjongo ye-sub-0.7300 kwaye mhlawumbi ukuya kuthi ga ngoku ngenkxaso eqinile kwi-0.7220 yokuthatha inzuzo yexesha elisondeleyo. Kukho konke okunokwenzeka, i-AUDUSD izinga lokutshintshiselana liya kuqhubeka liwela kwiseshoni yokurhweba elandelayo.
Inqanaba le-0.7220 linokuba yinto ekujoliswe kuyo kwiibhere. Ngelixa ukubuyiswa kwakhona kwinqanaba le-0.7555 kusenzeka, akukho datha yaneleyo yokuqinisekisa ukuguqulwa kwendlela elungileyo ngeli xesha. Oko kukuthi, inokumela nje ukuguqulwa kwendlela yokudityaniswa kwexesha elide. Kwi-plus side, ukubuya kwe-bullish ngaphezu kwe-0.7350 uphawu kuya kubuyisela ukuzithemba komthengi.
Emva kokugatywa kwi-0.7341, i-AUDUSD iguqule umgangatho wayo ophantsi ukuya kwi-0.7287 kwiiyure ze-4. Esi sibini sagqityelwa ukubonwa sirhweba kwi-0.7295, ngokungatshintshiyo imini yonke. Umyinge we-13 ohambayo uqikelelwa ukuba uvavanywe kwi-0.7360, ulandelwa ngokubuyela kwi-0.7383.
Ukuqhawula uphawu lwe-0.7350 kwi-AUDUSD kunokubonisa ukubuyela ekukhuleni ukusuka kwinqanaba le-0.7105. I-intraday trend is bearish. Umgangatho ophantsi we-0.7220 yinjongo elandelayo. Ukuhla ngaphantsi kwenqanaba elincinci lenkxaso ye-0.7250, ngakolunye uhlangothi, kunokukhawuleza ukuthengisa ukuthengisa kwaye kamva kuqalise ukurhweba ngasecaleni.
I-AUDUSD yexabiso leNtengiso yoRhwebo olukufutshane neeVeki ezininzi eziphantsi, Ukubetha i-0.7382
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Novemba 4
I-AUDUSD iye yahamba phantsi kwaye ngoku ivavanya phantsi kwinqanaba le-0.7400. Esi sibini sibhekisa emazantsi kwakhona, singaphumelelanga ukugcina ukuhamba kwaso kwi-0.7450 imiqobo elandela irali ebanzi yedola yaseMelika kunye noRhwebo lwase-Australia kunye Sales lwezezimali idatha. Ukuthiywa komngcipheko kuyagquba kwimarike yotshintshiselwano lwangaphandle, ngeemali ezikhuselekileyo ezixabisayo.
Amanqanaba okumelana: 0.7645, 0.7551, 0.7450
Amanqanaba enkxaso: 0.7350, 0.7220, 0.7150
I-dollar yase-Australia ayizange ikwazi ukunqumla kwinqanaba eliphezulu le-0.7480, kodwa i-AUDUSD ihlala kwinqanaba elisondeleyo lokudibanisa emva kokuhlehla ngaphantsi kwezinga eliphezulu le-0.7450, njengoko imarike iqhubeka nokukhulula i-RSI engaphezulu. Inqanaba le-0.7480, ngoko ke i-0.7551, isondele kwi-AUDUSD yamanqanaba okumelana, ukusuka kwinqanaba le-0.7450.
Ukwahlula okuzayo ngaphaya kunokomeleza ingcamango yentsingiselo enkulu ukuya phezulu kwixesha elizayo. Ukudibanisa okuzinzileyo ngaphantsi kwenqanaba le-0.7400 kunokubangela ukubunjwa kwe-mini top kunye nokubuyela kumyinge ohambayo we-13 kwi-0.7470 ye-intraday yanamhlanje, apho silindele umzamo ohlangeneyo wokuqhubeka phezulu.
Okwangoku, izikhombisi zobugcisa kwitshathi yeeyure ze-4 ziye zahamba kwindawo ye-bearish, ebonisa ukuba kunokwenzeka ukuba buthathaka ngakumbi. Ngaphezu koko, ukuba isilayidi sibonakalisa ixesha elifutshane, kunye nesibini esinokuthi sigcine umhlaba ongaphantsi kwe-0.7400, ugxininiso lunokubuyela kwindawo yokumelana ne-0.7450.
Ukushwankathela, i-AUDUSD iqikelelwa ukuba ihlale iphantsi koxinzelelo kwixesha elifutshane, kunye nenqanaba le-0.7383 mhlawumbi lizama ukunika inkxaso ethile. Kuzo zombini ixesha elifutshane kunye nexesha eliphakathi, ukuphindaphinda ngaphaya kwezinga le-0.7450 kunokubuyisela isibini kwindlela efanelekileyo.